जनता बैंक नेपाल लिमिटेड र हाम्रो अस्पताल प्रा.लि., बिराटनगर बिच स्वास्थ्य उपचार सेवामा छुट सम्बन्धि संझौता सम्पन्न भएको छ । संझौता पत्रमा हाम्रो अस्पतालका सचालक डा. संकरप्रसाद अधिकारी र बैंकको तीनपैनी शाखाका शाखा प्रमुख प्रशान्त शर्माले हस्ताक्षर गरेको थियो । संझौता अनुसार जनता बैंकका ग्राहक तथा कर्मचारी र तिनका आश्रितहरुले उक्त अस्पतालहरुबाट बिशेष छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । उक्त छुट सुविधा अस्पतालबाट प्रदान गरिने सम्पूर्ण ओ.पि.डि. सेवा, ल्याव, भर्ना भई गरिने उपचार सेवा तथा अप्रेशनमा प्रदान गरिने छ । यस छुट सुविधा अस्प - Aathikbazarnews.com जनता बैंक नेपाल लिमिटेड र हाम्रो अस्पताल प्रा.लि., बिराटनगर बिच स्वास्थ्य उपचार सेवामा छुट सम्बन्धि संझौता सम्पन्न भएको छ । संझौता पत्रमा हाम्रो अस्पतालका सचालक डा. संकरप्रसाद अधिकारी र बैंकको तीनपैनी शाखाका शाखा प्रमुख प्रशान्त शर्माले हस्ताक्षर गरेको थियो । संझौता अनुसार जनता बैंकका ग्राहक तथा कर्मचारी र तिनका आश्रितहरुले उक्त अस्पतालहरुबाट बिशेष छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । उक्त छुट सुविधा अस्पतालबाट प्रदान गरिने सम्पूर्ण ओ.पि.डि. सेवा, ल्याव, भर्ना भई गरिने उपचार सेवा तथा अप्रेशनमा प्रदान गरिने छ । यस छुट सुविधा अस्प -
जनता बैंक नेपाल लिमिटेड र हाम्रो अस्पताल प्रा.लि., बिराटनगर बिच स्वास्थ्य उपचार सेवामा छुट सम्बन्धि संझौता सम्पन्न भएको छ ।
संझौता पत्रमा हाम्रो अस्पतालका सचालक डा. संकरप्रसाद अधिकारी र बैंकको तीनपैनी शाखाका शाखा प्रमुख प्रशान्त शर्माले हस्ताक्षर गरेको थियो ।
संझौता अनुसार जनता बैंकका ग्राहक तथा कर्मचारी र तिनका आश्रितहरुले उक्त अस्पतालहरुबाट बिशेष छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । उक्त छुट सुविधा अस्पतालबाट प्रदान गरिने सम्पूर्ण ओ.पि.डि. सेवा, ल्याव, भर्ना भई गरिने उपचार सेवा तथा अप्रेशनमा प्रदान गरिने छ ।
लक्ष्मी र एभरेष्ट बैंकको मर्जर तुहियो
सनराइज बैंकको खोकनामा एक्सटेन्सन काउण्टर संचालन
महालक्ष्मी विकास बैंकको नयाँ शाखा नँयाबजारमा
रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सले आईपीओ निष्कासन गर्ने